यही हो करिश्माको परिवर्तन ? – Mero Film
यही हो करिश्माको परिवर्तन ?
हो, संसारमा सबै मानिस परिवर्तन हुन्छन् । मानिसको जात परिवर्तनशिल भएन भने त्यसले उसलाई अघि बढ्न सहयोग गर्दैन । तर, परिवर्तन कस्तो हुने भन्ने पनि हुन्छ ।
नेपाली फिल्म लाइनमा करिश्मा श्रेष्ठको नाम बलियो बनेको छैन । करिश्मा नेपाली फिल्ममा अभिनेता सलोन बस्नेतसँगको प्रेमका कारण हिट भइन् । उनले खेलेका फिल्म असफल भएका हुन् । करिश्मालाई आफूलाई लक नलागेको भन्ने पनि लाग्छ ।
उनै, करिश्माले अब भने नयाँ निर्णय लिएकी छिन् । उनले सबै जना यो संसारमा परिवर्तन हुन्छन् भन्दै अब परिवर्तन हुने पालो आफ्नो भनेकी छिन् । करिश्माले परिवर्तन हुने पालो आफ्नो भनेपनि कस्तो परिवर्तन भन्न खोजेकी हुन् खुलाएकी छैनन् ।
करिश्मा र सलोनविच प्रेम टुटेको छ । करिश्मा अब एक्लै फिल्ममा जम्छु भनेर लागेकी हुन् कि ? उनको पहिरन पनि मज्जाले खुल्न गएको छ । उनले खुलेको कपडाको कुरा गरेकी हुन् कि ? करिश्मा कस्तो तरिकाले परिवर्तित हुँदैछिन्, हामी त प्रतिक्षा गर्दैछौ है ।
२०७५ कार्तिक १२ गते १६:३० मा प्रकाशित
कोरोनापछि पनि नकारात्मक पोष्ट नगरे हुन्न दीपकजी
धनी हुन नचाहने पूजा
फिल्ममा कहिले, भिडियोमा अहिले
वर्षाका कस्ता कस्ता रहर ?
एक हप्तामा वर्षाले घटाईन २ केजी तौल
करिश्मा, रेजिना र उषाको निशालाई आर्थिक सहयोग
मनिषा अभिनित ‘इन्डिया स्वीट एन्ड स्पाइसिज’ ट्राइबेका फेस्टिभलमा
रियालिटी शो ‘सिक्रेट क्रस’मा अनिता लिम्बुको चर्चा
फिल्म ‘पृथ्वीराज’ को छायांकनमा जुटे अक्षय
नर्भिकमा उपचारत अभिनेत्री निशालाई चलचित्रकर्मी कल्याण कोषद्वारा सहयोग
अश्लिल गीत बनाएको आरोपमा कलाकारविरुद्ध उजुरी